2018 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းအတွက်တရုတ် Meditech ရဲ့ပေါ်လွင်ချက်များ | Meditech
အဘယ်ကြောင့် Meditech ကိုရှေးခယျြ
2018 ခုနှစ်တွင် Meditech ရဲ့ပေါ်လွင်ချက်များ
ဘယ်လိုအချိန်ယင်ကောင်! 2018 ပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ချီလွှဲပေးခဲ့သည်။ ခြော, 2018 Meditech ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်း၌ကြီးသောအဓိပ်ပာယျ၏တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တဖန်ပြန်ကြည့်, ငါတို့ရှေ့ဆက်တိုင်းခြေလှမ်း Meditech ရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးသမိုင်း၏ကိုသြဒိနိတ်ထာဝရအဖြစ်ထွင်းလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
နည်းပညာပိုင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု Meditech.In 2018 ၏ persistent ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်, Meditech ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာများရှာဖွေစူးစမ်းခြင်းဖြင့်ယင်း၏ထုတ်ကုန်အသစ်တက်ကြွထိုးသွင်း။
Meditech ကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံးဝေးလံသောဗဟိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်, အလှည့်အတွက် switched နှင့်မျှတသောလမ်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အောက်စီဂျင်မျိုးဆက်စနစ်, မျိုးစုံကိုစုံ, ပမာဏနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသဘောပေါက်ဝေးလံခေါင်ဖျားဗဟိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်အဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါဟာအောက်စီဂျင်မျိုးဆက်စနစ်၏ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုအသစ်တခုပုံစံဖန်တီးများနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်နှင့်ပထမဦးဆုံးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေပေးပါသည်။
အစဉ်အလာအောက်စီဂျင်မီးစက်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးဖွဲ့စည်းပုံမှာမြင့်မားဆူညံသံ, မြင့်မားသောအပူချိန်, မတည်မငြိမ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်န့်အသတ်ကိုချိုးဖောက် MD2018 ဆန်းသစ်ဘက်ပေါင်းစုံအောက်စီဂျင်မျိုးဆက်စနစ်, modular လှုပျရှားမှု, လွတ်လပ်သောအိပ်ဇောပြွန်, Ultra-အနိမ့်ဆူညံသံဒီဇိုင်း။
အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနေသောပူးတွဲ Meditech နှင့် Atlas အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအဆိုပါ, G စီးရီးမော်ဒယ်များ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင်, Meditech ကမ္ဘာ့လွတ်လပ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏တက်ကြွဖေါ်ပြခြင်း, အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအကြီးစားပြပွဲ၌ကြီးသောအောင်မြင်မှုများဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
2018 CMEF နွေပြပွဲ
2018 CMEF ဆောင်းဦးရာသီပြပွဲ
ဒီနှစ်မှာတော့ Meditech Ausmedi Kavia အိန္ဒိယဌာနခွဲတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာသူတို့အမိန့်များစွာအနိုင်ရခဲ့ခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာ5ဆေးရုံများကို install ပြုလုပ်အိန္ဒိယအောက်ဆီဂျင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါသည့်ပြိုင်ဘက်အောင်။
ဒီနှစ်မှာတော့ Ausmedi သြစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးနှင့်အရှုပ်ထွေးဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်မျိုးဆက်စနစ်, တက်ကြွစွာအစိုးရလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရာထူးတိုးနှင့်တရားဝင် Vetcentric, သြစတြေးလျ၏အကြီးဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့အထူးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့် Ringwood VET အရေးပေါ် installed ခဲ့သည်။
Meditech နှစ်ဖက်စလုံးက '' သယံဇာတအရင်းအမြစ်များ၏ဖြည့်စွတ်အားသာချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ပူးတွဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အိုဇုန်းလျှောက်လွှာများ၏အကြီးအဖှံ့ဖွိုးတိုးမြှင့်တင်ရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အိုဇုန်းရေစနစ်များနှင့်အတူနည်းပညာနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းထူထောင်လိုက်ပါတယ်။
Meditech နှင့် Atlas ပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းသစ်ကိုအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုမော်ဒယ်များနှင့်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်ပေး franchise မိတ်ဖက်ဖြစ်လာကြပါပြီ။
Meditech အများအပြားကျော်ကြားတက္ကသိုလ်များနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်း-တက္ကသိုလ်-သုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခွင့်အလမ်းများကို၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအသုံးပြုပုံကုမ္ပဏီစဉ်ဆက်မပြတ်၎င်း၏လွတ်လပ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကောင်းသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
အဆိုပါထိ မိ. လဲစရာက start ကနေတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားရန်, မသိစိတ်, Meditech 15 နှစ်မှတဆင့်သွားပြီ။ လမ်းတစ်လျှောက်ကသင့်စောင့်ရှောက်မှု, ထောက်ခံမှု, ယုံကြည်မှုနှင့်အားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
Post ကိုအချိန်: ဧပြီ-17-2019
Animal Oxygen Concentrator, အကြီးစားအောက်ဆီဂျင် Generator ကို , Psa အောက်ဆီဂျင်မျိုးဆက်ကျောင်းသားများစနစ် ,
နေရပ်လိပ်စာ: NO ။ 62-63, Xinmao, Qilu သိပ္ပံနည်းပညာစီးတီး, 299 Zidong ရိပ်သာလမ်း, Jinan နယူးပစ္စည်းများစက်မှုပန်းခြံ, Tianqiao ခရိုင်, Jinan ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
Meditech ကုသရေးအစည်းအရုံးတက်ရောက်ခဲ့ ...
Meditech အာရပ်ကျန်းမာရေး 2019 မှာ Shined